dhagaxyo isku dar ah, oo sidoo kale loo yaqaan dhagax qaali ah oo shaybaar ku koray,
Quothetic quartz Maaha dhammaan noocyada kala duwan ee 'quartz' inay si dabiici ah u dhacaan. Sababtoo ah dhalada dabiiciga ah badanaa waa mataano, "quartz synthetic" waxaa loo soo saaray in la isticmaalo ...
Teknoolojiyadda horumarsan ee farsamada ayaa hadda awood u leh inay soo saarto nooc kastoo morganite synthetic ah. Dabcan waa emerald laakiin sidoo kale tiro dhammaystiran ...
Aquamarine Synthetic Tiknoolajiyadda horumarsan ayaa hadda awood u leh inay soo saarto nooc kasta oo aquamarine synthetic ah. Dabcan waa emerald laakiin sidoo kale tiro dhammaystiran ...
Farsamooyinka casriga ahi waxay awoodaan inay soo saaraan nooc kasta oo bir ah oo bir ah. Dabcan waa emerald laakiin sidoo kale ...
Tags Beryl, Bicolor, Senttetik
Tiknoolojiyadda heerka sare leh waxay hadda awoodaa inay soo saarto nooc kasta oo bicolor beryl synthetic ah. Dabcan waa emerald laakiin sidoo kale ...
Tags Opal, qoryshaynaya, Senttetik
Xirmooyinka Aurora opal Fine Crystalline Opals oo leh qaab aan hagitaan ahayn oo ah nooca op-a-midabada Sunta jimicsiga aaladda ayaa lagu heli karaa midabbo kala duwan sida madow ...
Beryaha buluugga ah ee "Synthetic neon blue"
Tags Beryl, Paraiba, Senttetik
Tiknoolojiyadda casriga ah ee buluuga ah ayaa hadda awood u leh inay soosaarto nooc kasta oo isku roon ah oo ah buluug buluug ah. Dabcan waa emerald laakiin ...
Chrysoberyl dardaro leh - HDSM
Chrysoberyl Sunta isku dhejiska ah Macdanta ama gemstone chrysoberyl waa aluminium ah beryllium oo leh qaaciddada BeAl2O4. Magaca chrysoberyl wuxuu ka yimid ...
Sintetik Alexandrite - Bagdasarov
Tags Alexandrite, Senttetik
Astaandariirta xarfaanta leh ee loo yaqaan 'Alexandre alexandrite Alexandrite' waa mid ka mid ah dhagaxyada ugu yaabka badan. Farqiga ugu weyn ee udhexeeya alexandrite iyo gemstones kale waxay kuxirantahay gaar u ...
Sintetik Alexandrite - Czochralski
Synthetic Alexandrite Alexandrite waa mid ka mid ah dhagaxyada ugu quruxda badan. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya alexandrite iyo muraayadaha kale ayaa ku jira midabkiisa gaarka ah ...
1 2 Xigta>